It is me. Ko Niknayman.: အများစုဆန္ဒ စုဆန္ဒ မှ စုဆန္ဒ အများစုဆန္ဒ သို့
No Vote (မဲမပေးရေး၊သပိတ်မှောက်ရေး၊ နည်းပေါင်းစုံဖြင့်တိုက်ဖျက်နိုင်ရန် ကြိုးစားနေခြင်း) နဲ့ Vote No (မဲရုံ သို့ သွား၍ ကန့်ကွက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ဆန့်ကျင်ခြင်း) ဟူ၍ နအဖကို ဆန့်ကျင်တာချင်းအတူတူ ဘာကြောင့်ပြည် သူ လူထုကို ပေးသော သတင်းစကား တွင် နှစ်မျိုးဖြစ်နေရပါသလဲ။
ကျနော်တို့ တွေးကြည့်ဖို့ မေ့နေတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့၊ ကျနော်တို့ရဲ့ လူထု ခေါင်း ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုရင် လူထုကို ဘယ်လို သတင်းစကားပါးမလဲ။ ဒေါ်စုသာ ကျနော် တို့နဲ့အတူ (အကျယ်ချုပ်ခံနေရခြင်းမရှိဘဲ) အပြင်မှာ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ကို ဘယ်လမ်းကနေ လက်တွဲ ခေါ်ဆောင် သွားမှာလဲ။
ဒေါ်စုသာ ကျနော်တို့နဲ့ ရှိနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုတိုက်ပွဲဝင်မှာလဲ။ ဒီပွဲကို တနည်းအားဖြင့် ဒေါ်စုက ကျနော် တို့ ကို မှတ်ကျောက်တင်မယ့်ပွဲလို့ ယူဆတယ်။
အခုအချိန်မှာ ပြည်သူတွေအတွက် ဘ၀တစ်ခုလုံး ပေးဆပ်ထားတဲ့ ဒေါ်စုအတွက် ကျနော်တို့ဟာ “ဒေါ်စုသာ ကျနော်တို့နဲ့ရှိနေမယ်ဆိုရင်“ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကနေစတင်ပြီး Unity လုပ်ကြပါစို့ဟု၊ ဒေါ်စု လျှောက်မယ့် လမ်းအ တိုင်း ရဲရဲကြီး လျှောက်ကြပါစို့ဟု အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ အမှန် တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ ပြည်သူလူထု အပေါင်းအား အနူးအညွတ် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
Posted by အာဇာနည် at 4:07 AM